Weeraryahan ka tirsan kooxda Barcelona oo seegaya kulanka Champions League ee Manchester United – Gool FM
(Manchester) 06 Abriil 2019. Macallinka kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa shaki weyn geliyey Ousmane Dembele kulanka Arbacada soo aaddan ay garoonka Old Traffrod kula ciyaari doonaan Naadiga Manchester United ee lugta hore siddeed dhammaadka Champions League.
Dembele ayaa garoomada ka maqnaa tan iyo bilowgii bishii Maarso kaddib dhaawac muruqa ah oo uu sheeganayey.
Valverde ayaa shaaca ka qaaday in xiddiga xulka qaranka Faransiiska uu seegi doono kulanka Barca ay caawa oo Sabti ah la ciyaari doonto Atletico Madrid ee ka tirsan horyaalka La Liga, sidoo kale aysan u badnayn inuu qeyb ka noqdo safarka ay kooxdu ku aadeyso dalka Ingiriiska oo ay kula soo ciyaareyso naadiga macallin Ole Gunnar Solskjaer.
“Isagu diyaar uma ahan kulanka maanta, mana garan karno haddii uu isagu kulanka Arbacada diyaar yahay iyo inkale.” ayuu Valverde u sheegay Suxufiyiinta.
“Ma doonayno inaan halis gelinno isaga maanta ama Arbacadaba, kaddib dhibaato weyn ayaa laga qabaa kulamada soo socda, waan arki doonaa sida uu u shaqeeyo, si hubaal ah ayuu kulanka maanta u maqnaan doonaa.”
Dembele ayaa bandhig cajiib ah sameeyey xilli ciyaareedkan, waxaana uu dhaliyey 14 gool isagoo caawiyey siddeed gool oo kale 35 kulan oo u ciyaaray kooxda Catalan tartammada oo dhan.
Dhinaca kale 21-sano jirkaan ayaa saddex goor shabaqa soo taabtay lix kulan oo uu ciyaaray xilli ciyaareedkan tartanka Champions League.
"Manchester United waa inay dalab ka gudbiso N'Golo Kante xagaagan"